Home Somali News Somalia: Al-shabaab oo weerar ku qaadey xarun lagu tababaro ciidanka Sirdoonka
Subaxnimadii hore ee Axadda ayaa qarax weyn laga maqley albaabka hore ee xarun ay ku tababaran jireen ciidamada sida gaarka ah loo tababaro ee Onkod ee hoostaga Ciidamada Sirdoonka
Xarunta weerarka lagu qaadey ayaa ku tala degmada Shimbis ee magaalada Muqdisho.
Qaraxa ayaa loo isticmaaley gaari lagu soo xirey Bom sida lagu yaqaaney weerarada al-Shabaab kaas oo ahaa is-miidaamin, waxaana ku xigey koox dabley ah in ay weerar toos ah ku qaadeen xarunta.
Al-Shabaab ayaa sheeganaya in ay qabsadeen xaruntii tababarka isla markaana ay dileen askar badan oo ka tirsan nabad sugida.
Lama oga khasaaraha ka dhashey weerarkan, Ciidanka Sirdoonka ayaa sheegaya in hal askeri uga dhintey, isla markaana ay dileen dhamaan kuwii soo weeraray xarunta tababarada. NISA ayaa sheegeysa in al-Shabaabkii weerarka soo qaadey ay u baxsadeen xaafadaha dadka shacabka ah iyaga oo gudaha u galay guryaha dadka sooman ee ku dhaw halka weerarku ka dhacay
Warar madaxbanaan ayaa sheegaya in Saddex kamid ah al-Shabaab weerarka lagu diley, dad shacab ah ku dhaawacmeen,halka ciidanka nabadsugidda ay jirto dhankooda dhimasho iyo dhaawac.
Waa weerarkii u horeeyey ee Al-Shabaab ay ka fuliyaan xarumaha ciidanka ee Muqdisho, bisha Barakaysan ee Ramadaan dhex-deeda iyada oo ciidamada Dowladdu si weyn ugu diyaar garoobeen weerarada al-Shabaab ee Soonka dhexdiisa.
Xerada la weeraray ayaa ku dhaw Taliska ciidanka sirdoonka, lama garan karo sababta al-Shabaab u fududeysey in ay halkaas garaan!